ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းကို ထားဝယ်မြို့ တောင်သူလယ်သမားရေးရာတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
သူရဦးရွှေမန်းကို USDP ပြည်ထောင်စု ကြံံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဌတာဝန်ကနေ ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ထောက်ခံသူတွေကို တုန့်ဆိုင်းသွားစေတယ်လို့ အမေရိကန်အထက် လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell က သောကြာနေ့ မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်း ဥက္ကဌ ရာထူးက ဖယ်ရှားခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Mitch McConnell က UDSP ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုအနေနဲ့ သူတို့ပါတီကို ဘယ်သူတွေ ခေါင်းဆောင် သင့်တယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် အပြည့်အဝရှိပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပါတီ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို ရာထူးကဖယ်ရှားတဲ့ ကိစ္စမှာ အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်ပတ်သက် တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် အထူးတလည် စိုးရိမ်ပူပန်ရပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Mitch McConnell က မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ အခုလိုပါတီရဲ့ အတွင်းရေး ပြဿနာသက်သက်တစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဘာကြောင့် ပါဝင်သင့်တယ်လို့ ယူဆသလဲဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့ မိမိတိုက်တွန်းပါတယ် လို့ ပြောပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးဟာ မကြာခင်ကျင်းပတော့ မယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက် ပြီး စိုးရိမ်သောကတွေကို တိုးပွားစေပါတယ်လို့လည်း သူ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီအတွင်း အေပီ သတင်းတပုဒ်မှာလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဌကို ညဘက်ကြီး ရာထူးက ဖယ်ရှားခဲ့ချိန်မှာ အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ ကိစ္စကို အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတွေက ဝေဖန်နေကြကြောင်း ရေးသားထား ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထုက သူတို့အစိုးရဟာာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည် မှုကို ပိုမိုတိုးပွားအောင်ပဲ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်၊ ဆုတ်ယုတ် သွားအောင်မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး Katina Adams က ပြောကြားကြောင်း လည်း အေပီသတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အကြိတ် အနယ်ပြိုင်မယ်လို့ သူရဦးရွှေ မန်းပြောကြား
ငဖဲမြို့နယ်မှာ တရုတ် ပိုက်လိုင်းကြောင့် လျော်ကြေး မရသေးသူတွေ ဆန္ဒပြ
There is no hope for democracy for people in Myanmar. People must unite and help one another like during disasters. Myanmar government can never be for people in Myanmar rather they are working for goodness of China most.
Aug 16, 2015 02:57 AM
It is the movement to prolong and refresh USDP with military power to control the country with new retired generals from military.
ဒါ သန်းရွှေ ဒီမိုကရေစီ ခေတ် လုပ်ရပ် နဲ့ဖြေရှင်းမှု။
Aug 15, 2015 08:25 PM
ဝေဖန်ကြမျာပေါ့။ ပါတီတွင်း ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာ စစ်သားတွေ ရဲတွေ ဘာလို့ ဝင်ပါကြတာတုန်း။ ရွှေမန်းရဲ့လူတွေက သေနတ်နဲ့ ထပစ်မှာ စိုးလို့လ ား။ အဲ့လို ပစ်ရင်တော့ ရဲအမှု ဖြစ်လာပီပေါ့။
အေရး ေတာ ္ပံု ေအာင္ဖို႔
နေရပ်- လူ မသိမွ ျဖစ္မယ္
ဘရွှေ အလိုတော ်အတိုင်း “ဘိုးတော ်” ၊ ” မယ ်တော ်” မ ျား အခါပေးခ ျက် အရ “ည သန်းကောင်ယံ” အခ ျိန်မှာ “ဝင်းခင်း”ပြီး “ထွက်တော ်မူ နန်းကခွာတယ်”ကိန်းနဲ့အညီ လုပ်ရတာပါ။
Aug 16, 2015 04:22 PM
Aug 15, 2015 09:10 AM
ဘေရႊရဲ႕ ေညာင္၂ပင္ ေျမပံု
ဦးသိန်းစိန် ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ကေ ျာ်ကတည်းက ဦးရွှေမန်းပြောပြီးပြီပဲ။ ဦးသိန်းစိန်းက သမ္မတ မလုပ်တော့ဘူး ၊ သူပဲ လုပ်တော့မယ်လို့